Daraasad lagu baranayo awooda bani’aadamka sidii uu ula qabsan lahaa waqtiyada adag… – Hagaag.com
Daraasad lagu baranayo awooda bani’aadamka sidii uu ula qabsan lahaa waqtiyada adag…
Posted on 17 Maarso 2021 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Hal sano kadib markii la xirxiray suuqyada iyo meelaha laga dukaameysto ee Faransiiska, 15 qof oo isugu jira rag iyo dumar oo da’doodu udhaxeyso 27 ilaa 50 sano ayaa maalintii Axadii waxay bilaabeen tijaabo looga baahan yahay inay ku noolaadaan 40 maalmood god ku dhex yaala buur magaalada Ariege (koonfur-galbeed France), iyagoo laga soocay fikirka waqtiga, arrintaasi waxay qayb ka ah a tijaabo cilmi ah.
Madaxa howlgalka, Christian Chloe, ayaa sharraxay in ujeedku yahay in la barto awoodda bini’aadamka si ay ula qabsato haddii la waayo xaddiga goobaha raaxada ee sida ku meelgaarka ah, arrin la isla soo qaaday intii lagu jiray dhibaatada caafimaad ee uu keenay Cononavirus.
Baarahan Faransiis-Swiss-ka ah – oo aasaasay Machadka La Qabsiga Aadanaha – wuxuu yiri Sebtember 2020, “Waxay umuuqatay mid cad in annaga, koox ahaan, aynaan si fiican u aqoon sida looga jawaabo saameynta ay keeneen isbeddelada xaaladaha ba’an iyo qaabka cusub ee nololeed. “
Iyadoo lagu saleynayo, mashruuca “Deep Time” ayaa dhashay fiidnimadii Axadda; Iyadoo aan la wadan saacad, taleefan, ama laydh dabiici ah, kooxdan – oo ay ka kooban yihiin 7 rag ah iyo 7 dumar ah, marka lagu daro Chloe laftiisa – waa inay la qabsadaan heerkulka 12 darajo iyo 95% huurka gudaha Lombreve Cave, waxay halkaasi ka dhalinayaan koronto, waxay soo jiidayaan wax kasta oo ay u baahan yihiin sida biyaha iyagoo ka soo bixinaya god 45 mitir ah.
Xubnaha kooxda waxaa lagu qalabeyn doonaa dareemayaal u oggolaan doona daraasiin saynisyahanno ah inay meel fog kala socdaan.
“Tijaabadani waa tii ugu horreysay nooceeda ah ee adduunka,” ayuu yiri agaasimaha Shaybaarka cilmiga maskaxda ee Garashada iyo Xisaabinta ee Machadka, “ENS”.
Wuxuu intaas ku daray, “Dhammaan howlaha noocan oo kale ah illaa hadda waxaa loogu talagalay in lagu barto isdhexgalka fisiyoloji ahaaneed ee jirka, laakin daraasada kuma laha saameyn noocan dillaaca ah ee ku yimid howlaha garashada iyo shucuurta aadanaha.”
Godka ama kahfiga- oo ah mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn Yurub – ayaa laga sameeyay “3 tijaabo oo meel kala duwan ah, mid ka mid ah waa meel la seexdo, midka labaadna meel lagu noolaado, iyo kan saddexaad oo lagu sameeyo daraasado ku saabsan astaamaha goobta, gaar ahaan dhirta iyo xayawaanka,” sida Chloe u sheegay saxaafadda.